Amnesty oo soo saartay warbixinteedii sannadlaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Amnesty oo soo saartay warbixinteedii sannadlaha
La daabacay onsdag 25 februari 2015 kl 13.15
Dalka Sweden ayaa dhaleeceeymo loogu soo jeediyay war-bixintii sannadlaha 2014 ee laanta xuquuqda aadanaha Amnesty International ee hayadda caalamiga ee Qarammada Midoobey. Dhaleeceeymaha Sweden loo soo jeediyey ayay ka mid tahay in wax la iska weeydiiyey in dalkani aanu weli qaab-xeereedkiisa ku darin qoraalkii qeexa ee QM ee la xiriiray qeexidda macnaha jir-dilka.
Madelaine Seidlitz, ahna qareemad ka howl-gasha ururka Amnesty International laantiisa Sweden ayaa sheegtay in arrinkani uu muhiimad ku fadhiyo maadaama ey dalkan ku sugnaan karaan soo-galooti dhibaatooyin jir-dillo iyo dembiyo dagaal ka geeystey waddammadoodii:
- Markaa waxaa muhiimad ku fadhida in aaney dadyoowgaa ka badbaadin awoodda cadaaladda, maadaama oo keliya ey ku sugan yihiin waddan aan jirdilku ku jirin xeerka ciqaabta ee dalkan.
Madelaine Seidlitz ayaa sidoo kale sheegtay in xaaladdaasi noqon lahayd dhabbada keliya ee dadyoowgii dhibaatooyinka loo geeystay eycaddaalad ku heli kari lahaayeen.
Sidoo kale ayaa Sweden lagu dhaleeceeyey arrimmo horeyba loogu dhaleeceeyey oo ey ka mid ahaayeen ballaan-qaadyo diblomaasiyadeed oo sababay in dadyoow dib loogu celiyey waddammadii ey ka soo jeedeen halkaasina oo jir-dillo ey halis ugu jireen. Kuwaasina oo laga magacaabey dhacdooyinkii Agiza iyo al-Zari, oo sannadkii 2001 dib loogu celiyey dalka Masar iyada oo markii hore gacanta loo geeliyey ciidammada nabad-sugidda ee Mareeykanka, kuwaasina oo magacooda loo soo gaabiyo CIA.
- Illaa iyo hadda lama hayo dawladda ku dhawaaqda in aan la aamini-doonin ballan-qaadyo diblomaasiyadeed, sidii waagaasi la sameeyey kolkii la celinayey Agiza iyo Al-Zari. Middaasina oo ah shuruud uu ururka Amnesty weli qabo, iyo in dalkani ballaan qaado in aan la isticmaali doonin ballan-qaadyo, sida ay sheegtay Madelaine Seidlitz.
Waxaa sidoo kale war-bixinta sannadlaha ee Amnesty International farta lagu fiiqay dhibaatooyinka faqooqa iyo ururrada cunsuriyiinta iyo iney weli ka dalkan ka howl-galaan, inkasta oo Madelaine Seidlitz ka gaabsatay inay ka jawaabto su'aal ahayd in habka ugu wanaag-san ee looga hor-tegi karo ururradaa ay tahay in xeerka lagu mamnuuco.
Caqabadda kale waxay tahay in hoos loo dhigey maxkammado badan ee la xiriirey kufsiga. Dawladda ayaa baaritaan u saartay la xiriira habka baaritaannada ee falalka kufsiyada ee dalka ka dhaca iyo sida ciidanka ammaanku uga how-galaan, waana howl uu ururka caalamiga ee Amnesty uu soo dhoweeynayo:
- Midda muuqata waxay tahay iney aad u kala sareeyaan tirada falalka dembiyada kufsiga iyo inta maxkamad la hor-keeno. Waana laga mideey-san yahay in loo baahan yahay in gunta loo dhaadhaco, sida ay sheegtay Madelaine Seidlitz,ahna qareenad ka howl-gasha ururka Amnesty International.